Ma maqasheen hadaladii lagu soo dhaweeyey Xabashadii Kismaayo tagtay ? | Voice Of Somalia
Ma maqasheen hadaladii lagu soo dhaweeyey Xabashadii Kismaayo tagtay ?
Posted on January 8, 2016 by Voice Of Somalia Image
Inta aanan u galin hadaladii lagu soo dhaweeyey Xabashadii ka tagtay magaalada Kismaayo, aan marka hore u mahadceliyo Xil. Maxamed Cabdi Yuusuf, Xil. Cabdi Xaanshi iyo waliba Ex Danjire. Abuukar Armaan, Kuwaasi oo dhowr jeer si aan gabasho lahayn u tilmaamay, in Itoobiya ay la wareegtay Soomaaliya, ka dib sanado badan oo ay tabcaysay kooxo Soomaali ah oo u fududeeya damaceeda ku aadan qabsashada dalkaasi.
Wasiirkan ayaa yiri hadalo lalayaabay balse muujinayo nooca shaqsi ee uu yahay, Aqoonta uu u leeyahay dowladnimada iyo dhaqankeeda iyo waliba Ixtiraamka uu u hayo dareenka dadka Soomaalida ah. Waxaana hadaladiisa ka mid ahaa xilligii uu soo dhawaynayey ciidamadaasi ajanabiga ah ” Waanu ku faraxsanahay imaanshadiina, Waxaana aaminsannahay inaad timaadeen qeybo ka mid ah dalkiina” !
Hadalada wasiiradan Daaroodka ah, ayaa dhabaynayo doodo ay qabaan dad badan oo Soomaali ah oo isugu jira Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Culimo iyo Saraakiil ciidan, Kuwaasi oo ku doodayey in Itoobiya ay la wareegtay Soomaaliya min Waqooyi ilaa Koonfur. Waxaana dadkaasi ka mid ah Xil. Maxamed Cabdi Yusuf, Xil. Cabdi Xaanshi iyo waliba Ex Danjire. Abuukar Armaan. “Waan ku faraxsanahay imaanshadiina, Waxaanna aaminsanahay inaad timaadeen qeybo ka mid ah dalkiina ” !
Markaad u fiirsato dhadhaqaaqyada ay Itoobiya ka waddo Koonfurta iyo Bartamaha dalka, Waxaa runtii kuu soo baxaysa in ay xittaa la wareegtay guud ahaan howlgalkii AMISOM. Bal fiiriya inta gobol ee ay maanta ka howlgasho, Iyadoo waliba ah dowladdii ugu danbaysay ee ku soo biirta howlgalkaaasi. Waa Galgaduud, Hiiraan, Bakool, Baay, Gedo, Jubba hoose iyo waliba Jubba Dhexe oo ay haatan ku socoto.Waxaa kaloo kuu soo baxaysa in ay xittaa la wareegtay dowrkii ay lahayd Dowladda Federaalka. Yey maanta isku dacweeyaan maamul goboleedyada dalka ka jira ma Dowladda Federaalka mise Dowladda Itoobiya ? Yaa haatan ku kala dhexjira Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ? Koonfur Galbeed iyo maamulka Bakool-Sare ? Yaa maamula kooxda Suufiyada iyo Somaliland ? Xageese looga taliya gobolka GEDO ? Ma Doolow Addo mise Garbahaaray ?
Markaad u fiirsato ragga maanta horboodayo Itoobiya, Waxaad arkaysaa runtii in ay u badan yihiin rag ka tirsanaan jiray Xarakaadkii Islaamiga ahaa ee dalka soo maray sida Itixaad iyo Islaax oo kale. Musiibadan ku habsatay shaqsiyaadkan ayaa loo aanaynayaa in aysan markii horaba daacad ka ahayn diintii ay sheegan jireen amaba uu hungur iyo xukun jacay ka leexiyey wadadii ay ku socdeen.Tacissa Cabdu diiraan wa dirham.
Ethiopia : Ethiopia: People in Addis Ababa are scared, living under ‘martial law’, says opposition
Ururka Damul Jadiid oo Laba Garab u kala Jabay